Meeqa Lacag ah ayaa ku baxday Mooshinka xog - iftineducation.com
Meeqa Lacag ah ayaa ku baxday Mooshinka xog
iftineducation.com – Wararkii ugu dambeeyay ee mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul wasaaraha ee laga helayo xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in xildhibaanada qaar ay ka arrinsanayaan xaaladda taagani.
Sida uu horay u sheegay guddoonka baarlamaanka berrito waxaa kulmaya xildhibaanada golaha shacabka oo guda galaya ajandaha mooshinka waxayna baarlamaanka shaqeyn doonaan subax iyo galab.
Waxaa sidoo kale jirta in xildhibaanada la kala shukaaminayo oo dhinacyada isku haya siyaasadda ay aad ula hadlayaan si xildhibaan kasta oo dhankoda u ahaado.
Xafiisyada madaxweynaha iyo raysal wasaaraha waxaa ka soconaya kulamo gaar-gaar ah oo dhinac kasta ay kaga hadlayaan mooshinka iyo xaaladda sida ay iminka tahay.
Sida ay Marqaan News u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay waxaa xarunta baarlamaanka iyo meelaha kale ee xildhibaanada isugu yimaadaan lagu arkayaa xildhibaanno ka mid ah kuwa sida weyn wax uga wada mooshinka oo ku jira xukuumadda oo la showraya kuwa diidan.
Xildhibaanada diidan mooshinka ayaa ku adkeysanaya in mooshinkani yahay sharci darro oo aysan aqbali doonin la meel mariyo.
Ilo ku dhow dhow madaxtooyada ayaa ku warramaya in xildhibaanada mooshinka wada ay aad kaga soo horjeedaan in Ra’iisul wasaaruhu isdifaaco taasoo ay ka baqanayaan haddii ay dhacdo in mooshinku uu u socon waayo.
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in mooshinkani lagu bixiyay lacago ka yar $10.000 wararka qaar ee Saadaal Media heshay waxay sheegayaan in lagu bixiyay dhaqaale aan ka badneyn $5.ooo taasoo ifinaysa shaki umad dhan ay ka baqaan waxa mooshinkani yahay.
Waxaa filayaa in Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya DR. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu hortagi doono baarlamaanka isla markaana jeedin doono khudbad uu kaga hadlayo waxqabadka xukuumadda Federaalka ee uu gar-wadeenka ka yahay.
Heesta Aabaha Ubadkayga -Muuqaal soo jiidasho leh
Daawo : Ari dhaley Cunug Mucjiso ah oo nuuciisa la arag